Saamaynta guud ee uu Covid-19 ku yeeshay Soomaalida Sweden (Tillaabooyin khuseeya oo la qaaday) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Saamaynta guud ee uu Covid-19 ku yeeshay Soomaalida Sweden (Tillaabooyin khuseeya oo...
(Hadalsame) 30 Maarso 2020 – Waxaa diiradda la saaray Soomaalida oo ay dadku u qaybsameen mid ku wiirsadey iyo mid ka walaacey, ka dib markii ay saxaafadda Sweden faafiyeen warar sheegaya inay Soomaalidu u badan tahay dhimashada fayraska corona.
”Ugu yaraan 6 ka mid ah 15 qof oo fayraska corona ugu dhimatay magaalada Stockholm ayaa Soomaali ah,” sida ay sheegtay Jamciyad ay leedahay Soomaalida Sweden.
“Markii uu cudurkani Sweden soo gaarey, ma jirin xog ku filan oo ay Soomaalidu hayeen, qaar badanna sidoodii ayay nolosha u wateen,” ayay tiri Jihaan Maxamed, oo jamciyadda xubin ka ah oo u warrantay barnaamijka Agenda ee SVT.
Jihaan oo la weydiiyay in ay saba jiri karto waxay tiri: “Ma ogi sababta ay agagaarka Järva ugu badan yihiin dadka u dhintay fauraska Covid-19, balse qaar badan waxay ku nool yihiin guryo ay dad badan ku deggan yihiin, sidoo kale waxaa liita hab-raaca faya-dhowrka.”
Jihaan ayaa sheegtay in ay la tahay “in dhaqanka Soomaalida arrimo ka mid ah in ay qeyb ka ciyaareen in fayraska uu ku dhex faafo”.
“Dhaqanka Soomaalida waa muhim (marka la eego) is dhexgalka bulshadu, taageerada iyo in la is booqdo, gaar ahaan haddii uu qof xanuunsan yahay, kaaga darane Soomaalidu xog badan cudurka kama hayaan,” ayay tiri Jihaan oo sheegtay inay muhim tahay in lakala fogaado.
Arrintan ayaa muran ballaaran ka oogtey dalka Sweden gaar ahaan baraha bulshada, iyadoo ay Soomaali badan ku doodayaan “inay ahayd in aad looga fiirsado faafinta warkaas maadaama ay dhalin karto in Soomaalida la faquuqo”, sida Soomaalida qaar ay ku qoreen barahooda bulshada.
Arrimaha kale ee doodda dhaliyay waxay tahay in qowmiyadaha kale ee fayraskan uu saameeyay inaan la magacaabin, marka dadku way ka “xumaadeen” in si gaar ah farta loogu godo Soomaalida. Durba waxaa bilowday “in kooxaha cunsuriyiinta ah in ay ku maadeystaan Soomaalida.
“Annaga oo aan diidaynin inay dadku dhinteen ama is difaacaynin, waa inaan si kale oo ka qurux badan u qaabaynaa, sida inuusan jirin tirakoob rusmi ah oo kasoo baxay Hay’adda Daryeelka Caafimaadka iyo Hay’adda Arrimaha Bulshada,” ayuu yiri Axmed Kaboole oo ka tirsan Golaha Degaanka Stockholm oo sheegay in aanu warka la hayaa weli rasmi ahayn.
Wuxuu intaa ku daray: “Tan kale Sweden illaa iyo hadda si rasmi ah uma tirakoobin dhalashada dadka cudurkan u dhintay”.
Qaar ka mid ah dhallinyarada waxay sheegayaan in Soomaalida “aysan weli ku baraarugsaneyn halista cudurka iyagoo tusaale ahaan weli dhooban makhaayadaha iyo meelaha lagu sheekaysto.” Wiil dhallinyaro ah oo la hadlay weriya Maxamed Xaaji Xuseen ayaa yiri: ”Shalay ilaa 40 qof ayaan ku arkay meel makhaayad ah.”
“Waxaa la iga codsaday inaan af Soomaali ku tarjumo tilmaamamaha iyo xogaha ku saabsan fayraska corona,” ayey tiri Iqra oo BBC la hadashay, iyadoo intaa ku dartay waa “si ay Soomaalidu uga digtoonaadaan halistiisa, wixii la farayana u fahmaan.”
Dhamaan goobaha dadwaynaha iyo jidadka ayaa la dhigay qoraallo af Soomaali ah oo cudurka looga baraarujinayo Soomaalida.
Kiisaska guud ee dalka Sweden waxay hadda marayaan 3,447 oo kiis, kuwaas oo in ka badan 378 ka tirsan ay cusub yihiin, geerida guud waxay maraysaa in ka badan 105 qof, waxaana la qiyaasayaa in ugu yaraan 20 qof ay Soomaali yihiin.”
Previous article”Oo ma dhakhaatiir baa joogta!?” – Arag sida ay Kenyaanku uga falceliyeen warka sheegaya inay Somalia dhakhaatiir u direeyso Talyaaniga!
Next articleMW Farmaajo oo qaab aan caadi ahayn uga qayb galay shir caalami ah + Sawirro